Tabilao hazavana LEDD200 LED fanaraha-maso medaly napetraka ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy hopitaly | Wanyu
Ny valindrihana hazavana LEDD200 LED amin'ny valin'ny hazavana dia napetaka ho an'ny toeram-pitsaboana sy hopitaly
Ny andian-jiro fanandramana LED200 dia misy amin'ny fomba fametrahana telo, jiro fandinihana finday, jiro fandinihana valindrihana ary jiro fanadinana manda.
LEDD200, ity anarana maodely ity dia miresaka jiro fanadinana valindrihana.
Ny jiro mitazona io hazavana fanadinana io dia vita amin'ny akora ABS. Ny takamoa 16 OSRAM dia afaka manome hazavana hatrany amin'ny 50.000, mari-pana loko 4000K. Ny famonoana famonoana otrikaretina dia azo esorina.
■ efitrano fitsaboana marary
■ Toeram-pitsaboana veterinera
■ efitrano fanadinana
Ny hazavana fanadinana dia azo ampiasaina amin'ny fanadinana ENT (Eyes, Nose, Throat), nify, gynecological, dermatological, cosmetic médicaux ary ny mpitsabo any ivelany.
1. Aram-piadiana sy sandry lohataona
Ho an'ny jiro fanadinana valin-drihana tsotra teo aloha, sandry iray mbola miandry ihany, izay tsy mora amin'ny fihodinana sy ny fanitsiana ny haavony. Noho izany, mba hamahana ity olana ity dia namolavola ny sandry mihodina sy ny sandry lohataona izay mety amin'ny jiro fanadinana valindrihana. Tsy afaka mihodina 360 degre mitsivalana fotsiny izy io, fa afaka manitsy ny haavon'ny lohan'ny jiro koa amin'ny tany.
2. takamoa Osramy maharitra
Ho an'ity hazavana fanadinana ity dia misafidy takamoa OSRAM nafarana any Alemana izahay. Ny fiainam-panompoany dia mety hahatratra hatramin'ny 50 000 ora.
3. Fomba roa hanitsiana ny mpihazava ny jiro
Fahazoana mpampiasa-manodidina ny hazavana sy ny tantana Central mamela ny fametrahana sy ny orientation.
4. Tanana sterilizer azo esorina
Ny famonoana otrikaretina dia mora apetraka ary azo esorina amin'ny famonoana otrikaretina. Matetika izahay dia mampita hazavana fanadinana amin'ny tahony roa, ny iray ampiasaina isan'andro ary ny iray ho an'ny tahiry.
5. Buttsons mampihena
Ny bokotra manjavozavo dia eo anilan'ny fitoeran-jiro, izay afaka manitsy ny hazavan'ny jiro fanadinana haingana sy mora. Famolavolana teboka telo, kilasika, fitomboan'ny hazavana, fihenan'ny hazavana. Ny hazavan'ny jiro fanadinana dia azo ovaina amin'ny ambaratonga folo.
Jiro fanadinana valindrihana LEDD200
Previous: DD620620 Valin-drihana ankapobeny taratry ny hopitaly roa amin'ny alàlan'ny hopitaly fandidiana avy amin'ny orinasa
Manaraka: LEDD260 LED hazavana fanadinana valindrihana valindrihana ho an'ny biby biby
LEDD740 Ceiling Mount LED Head iray OT Light fahazavana ...
LEDL740 LED alokaloka OT tsy azo ovaina miaraka amin'ny B ...